‘प्रेम गीत- ३’ मा प्रदिपको जोडी को ? निर्देशनमा पनि डेब्यू गर्दै निर्माता सेन « OSBreak
‘प्रेम गीत- ३’ मा प्रदिपको जोडी को ? निर्देशनमा पनि डेब्यू गर्दै निर्माता सेन
ओएस नेपाल/ काठमाडौँ । निर्माता सन्तोष सेनको पाँचौ चलचित्र प्रेम गीत ३को फस्ट लुक्स सार्वजनिक गरिएको छ । निर्माता सन्तोष सेन र छेतेन गुरुङले एक साथ निर्देशन गर्न लागेको यो चलचित्र आम दर्शककका लागी प्रतिक्षाको चलचित्र बन्ने भएको छ।
चलचित्रमा केहि समय अगाडी महानायक राजेश हमाल पनि राखिने बिषय निकै चर्चामा आएको भए पनि निर्माण यूनिटले अहिले यस विषयमा केही बोल्न चाहेन । चलचित्रमा मुख्य नायकको रुपमा प्रदिप खड्का नै रहने स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार नायक प्रदिप खड्काले अभिनय गर्ने तय भएको अर्को चलचित्र प्रेम गीत ३ कै लागी छाडीएको समाचारहरु बाहिरएका थिए ।
चंखे शंखे पंखे, प्रेम गीत, प्रेम गीत २, मेरी मामु पछिको प्रेम गीत ३ सन्तोष सेनको पाँचौं प्रोजेक्ट हो। पछिल्लो समय चलचित्रले खासै उत्साह जनक ब्यापार गर्न नसकेका बेला सन्तोष सेनले भने आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिने ओएसुनेपाललाई जानकारी दिए । प्रेम गीतको तेस्रो सिरिज यो बर्षको अन्तिम ‘चैत २८’ अर्थात नयाँ वर्षको अवसरमा प्रर्दशनमा आउने भएको छ ।